Raharaha Antanimena : Lehilahy iray mbola karohina -
AccueilSongandinaRaharaha Antanimena : Lehilahy iray mbola karohina
Mihazakazaka ny raharaha mahakasika ilay fikasihan-tanana mpisolovava teny Antanimena, ny marainan’ny sabotsy 1 desambra lasa teo. Efa vita ny fanadihadiana mahakasika izany, ka lehilahy roa aloha izao no niaiky ny helony teny amin’ny sampana fikarohana ady heloka bevava ny andron’io ihany. Afakomaly izy ireo no natolotra ny fampanoavana, ka nidoboka am-ponja eny Antanimora. Araka ny horonan-tsary efa niparitaka eran’ny tambajotran-tserasera sy vaovao voaray avy eo anivon’ny zandary, dia telo izy no tena voarohirohy nanao ity herisetra nandratrana olona iray ity. Mbola karohina araka izany ilay lehilahy iray voalaza fa fanintelony nanao iny fikasihan-tanana iny, ary efa eo am-pelatanan’ny zandary avokoa ny momba azy, saingy tsy mahasahy manantona eny amin’ny mpitandro filaminana izy na efa nandefasana fiantsoana.
Nametraka fitoriana miantefa amin’io mpisolovava io ireto farany, raha ny nambaran’ny kolonely, Randriamanantena Pascal, nisahana ny raharaha. Raha ny nambaran’ireto lehilahy ireto mantsy dia voalaza fa nanana fikasana hifofo ny ainy koa ity mpisolovava, izay tao anatin’ny fiarany niaraka tamin’ny namany. Nohosena ary nianjera mihitsy ny iray voalaza fa miaramila kilasy voalohany mpiandry ilay jeneraly rainy eo anivon’ny primatiora. Tsy azo sary kosa anefa izany rehetra izany, raha ny fanazavana hatrany, fa ireny efa hitan’ny besinimaro ireny ny fihetsika nasehon’ireto telolahy ireto, tamin’io maraina io.
Na dia izany aza anefa, nampahafantatra ny olona mivoy ny tsaho rehetra eo anivon’ny tambajotran-tserasera ny zandary fa resaka tiana halaza fotsiny no betsaka fa tsy marina ny ampahany. Anisan’izany ny filazana fa nisy baiko sy sakana tsy hanaovana ny fanadihadiana tamin’izany. Nandiso izany izy ireo fa tsy nisy avokoa izany fa nanao ny asany an-kalalahana ny zandary. Nitolo-batana ihany koa fa tsy nosamborina ireto olona voarohirohy tamin’ny raharaha. Nangataka fihavanana tamin’ny mpisolovava niharan’ny fikasihan-tanana kosa izy ireo tamin’izany, saingy tsy nahazo intsony. Amin’ny tranga tahaka izao, tsy misy afa-maina ary tsy misy ny eo ambony lalàna. Rehefa misy zavatra ohatra ireny, na tsy mitory aza ilay niharan’izany dia tsy maintsy hiharan’ny lalàna izay tompon’antoka, izay hoe ny heloka vita no tsy maintsy hotsaraina.